Akhriso:Magacyada Saraakiisha Dowladda Federaalka looga Dilay Hoteelka Naasa Hablood2 Ee Muqdisho.
Sunday October 29, 2017 - 15:59:21 in Wararka by Super Admin
Waxaa la helayaa magacyada Mas'uuliyiin iyo Saraakiil sar sare oo ku dhimatay howlgalkii Istish-haadiyada iyo Inqimaasiayda isugu jiray ee ciidamo katirsan Xarakada Al-Shabaab ku qaadeen casir liiqii shalay hotel Naashablood 2 oo u dhow xarunta
Waxaa la helayaa magacyada Mas'uuliyiin iyo Saraakiil sar sare oo ku dhimatay howlgalkii Istish-haadiyada iyo Inqimaasiayda isugu jiray ee ciidamo katirsan Xarakada Al-Shabaab ku qaadeen casir liiqii shalay hotel Naashablood 2 oo u dhow xarunta Madaxtooyada magaalada Muqdisho.
Dadka ku dhintay Weerarkan oo kor u dhaafaya 50 Ruux, waxay isugu jiraan Mas’uuliyiin dowladeed, Saraakiil sar sare oo ciidan, Xillibaanno horey, iyo kuwa kale.
Idaacadda Al-Furqaan waxay heshay qaar kamid ah magacayada Xubnihii kala duwanaa ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday Weerarka Naashablood2.
Xubnaha Ku dhintay Howlgalka waxa kamid ah:
1. Cabdi Naasir Gaarane, oo ahaa Xildhibaan hore, hadana kamid ahaa Saraakiisha Gudiga Taakuleynta ciidamada dowladda.
2. Korneel Maxamed Yuusuf Nuur Fanax oo ahaa Taliyihii ciidamada Booliiska degmada Dayniile, waxaana la dhintay 10 ilaaladiisa ah.
3. Xasan Buufoow oo ahaa Korneel katirsan Nabadsugidda, una qaabilsanaa hogaanka Maaliyadda.
4. Gaashaanle Bootaan oo ahaa Taliye Booliis, waxaa la dhintay Istaafkiisa.
5. Madoobe Nuunoow oo ahaa Waziirkii arimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed, horayna xilal kala duwan usoo qabtay.
6. Zakariye Gaab oo ahaa La Taliyaha Waziirka Amniga ee dowladda Federaalka.
7. Maxamed Xasan oo kamid ahaa Xillbinaadii hore, wuxuuna dowladdii Xasan Sheekh kasoo noday Wasiiru dowle.
8. Qunsulkii Itoobiya u joogay Muqdisho oo lagu amgacaabo Abraha Welda ayaa kamid ah dadka la dilay.
9. Guuleed Muuse Maxamed Aadan oo ahaa taliyaha howlgalada Nabadsugida qeybta bari oo ah degmooyinka Yaaqshiid, Kaaraan, Shibis iyo Cabdi Casiis., waxaana xusid mudan inuu hogaaminayya ciidamada Dowladda ee dagaalka la galay ciidamada Mujaahidiinta ee la wareegay hoteelka.